SIDA LOO KORO TOONTA GURIGA EE DHERIGA DAAQADA DAAQSINKA QOOB-KA-SOOSAARAY, MARKAAD TAHAY INAAD KU BEERI, WAXA LA SAMEEYO HADDII AAD RABTO INAAD CAGAARSHO, SHURUUDAHA LOO BAAHAN YAHAY? - BEER CAGAARAN
Hadda waxaad si buuxda u ogaan doontaa sida ay u koraan toonta guriga.
Awoodda inuu ku koro toonta guriga, i.e. on windowsill, kuu ogolaanayaa inaad u cuno ma aha oo kaliya in la soo goostay tan iyo dayrta, laakiin sidoo kale cusub, tayada aad hubsan kartaa, ka duwan midka iibsaday. Taasina uma baahnid waxqabadyo gaar ah, kaliya aqoon asaasi ah oo ku saabsan sida loo beero geedo.
Thanks to maqaalkeenna, waxaad ogaan doontaa sida ay u koraan toonta ka soo toon ama abuurka on windowsill ah. Waxaan kuu sheegi doonnaa waxa carrada ay ka fiican tahay inuu kobciyo iyo haddii khudradda ay ku kori doonto hidroponics. Aynu ka hadalno xaaladaha dayactirka iyo daryeelka saxda ah. Waxa kale oo aad daawan kartaa fiidiyaha waxtar leh mawduucan.
Kala duwanaanshaha beerashada beerta iyo guriga
Digniin: First of all, toon, oo aad go'aansatay inaad ku koraan at home, waxay u baahan tahay daryeel ka badan waxa ku koraaya sariirta beerta, sababtoo ah at guriga on windowsill ah ma awoodi doonaan in ay helaan wax kasta oo ay u hesho on waddada: iftiin fiican iyo waraabiyo kaas oo rotting rhizome uusan bilaaban.
Toontada si gaar ah ayaa loo baahan yahay taxaddar taxaddar leh xilliga jiilaalka marka uu jiro qorraxda iyo kuleylka. Waana waqtigan sanadka in dadka intooda badani ay bilaabaan inay koraan, si ay u haystaan ​​wakiilo fara badan oo liddi ku ah fayraska marka lagu jiro xilliga jirrada.
Garlic waa qayb ka mid ah waxyaabaha ugu jecel diyaargarowga suxuunta badan, sidaa daraadeed waxaa jira dalab dheeraad ah oo loogu talagalay. Akhri qoraalladayada ku saabsan waxa la abuuri karo sanadka soo socda ka dib markii khudraddan, iyo sidoo kale ku saabsan xiisaha guga beeritaanka guga, jiilaalka, iyo sidoo kale noocyada "beeritaanka toonta" waa.
Muuqaalka jiilaalka ama guga?
Dadka intooda badan ee ku xeeldheer ganacsigan waxay si firfircoon ugu talinayaan inay sii kordhaan toonta jiilaalka daaqadda, sababtoo ah waxay u adkahay iftiin yar ama kuleyl la'aan, dhiciddu waxay dhacdaa marka uu jiro xaddi qoyaan ee substrate (ku saabsan sida loo keydiyo toon qaboobaha Ma suurta gal ah in la beero guga, halkan ka akhriso). Toonta jiilaalka ma laha waqti wakhti dheer ahsidaa daraadeed waa u fiicnaan kartaa sii kordhaya xilliga qaboobaha ee guriga. Guga sidoo kale waa la isticmaali karaa, laakiin waxay leedahay sifooyinkaa kuwan hooseeya.
Xulashada kala duwan
Si aad u beerato guriga, gabi ahaanba nooc kasta oo jiilaalka iyo guga ee toonta ah ayaa sameyn doona, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad doorato oo keliya midka koray wadada oo aad jeceshahay sababtoo ah dhadhankiisa iyo tayada kaydinta. Laakiin, dabcan, waxaa jira noocyo noocyada jiilaalka qaboobaha ee lagu tijaabiyey dhakhaatiirta khibrada leh: Sochi - 56, Otradnensky, Kharkov.
Waa noocyadani siinayaan dhalidda ugu weyn ee xilliga qaboobaha ee guriga. Haddii ujeedada beerashada - qaadashada baalshiinka, waxaad isticmaali kartaa noocyada xagaaga xagaaga.
Noocyada jiilaalka, sida caadiga ah, waxaa lagu beeray guriga xilliga dayrta ama xilliga jiilaalka, maxaa yeelay, sida kor ku xusan, noocyada noocaan ahi ma laha waqti nasasho, taas oo ah muuqaalkiisa gaarka ah. Waqtiga beeritaanka noocyo noocaas ah way kala duwan tahay tan soo socota: laga bilaabo dabayaaqadii Sebtembar ilaa horraanta Oktoobar iyo horraantii Febraayo ilaa dhammaadka Maarso.
Noocyada xagaaga ayaa la beeray si ay u soo saaraan geedo toon ah on windowsill ahmaxaa yeelay waxay siiyaan dhashooyin yar iyo fara badan. Waxaa lagu beeray guga: laga bilaabo dabayaaqadii Abriil ilaa horraantii Maajo.
Tallaabada Talaabooyinka Talaabada
Waxay qaadan doontaa awood ku filan oo loogu talagalay beerto: aad u ballaaran oo ugu yaraan 20 cm qoto dheer, sidaa daraadeed biyaha inta lagu jiro waraabintu ma soo daadinayaan geesaha. Nooc ka mid ah weelkani wuxuu gabi ahaanba ciyaaraa ma jiro, sida maaddada laga yaabo in la sameeyo. Dhammaan waxay ku xiran tahay doorbididda shakhsi ahaaneed.
Sidaa daraadeed, habka ugu haboon ee ka baxsan waxay noqon doontaa wax soosaarka madaxbannaan ee sanduuq alwaax ah oo leh godad ka sameysan horey u sii daadinaysa dareeraha xad-dhaafka ah ee santuuqa, taas oo aan la ilaawi karin.
Seeds iyo toon
Beerto, waxaad ku qaadi kartaa abuurka, ilkaha ama ilkaha. Miro abuurka waa nidaam aad u adag, sababtoo ah sanadka ugu horreeya nidaamka xididka ayaa la sameeyay kaliya, iyo labaad, caleemaha ugu horeeya muuqan. Way fiicantahay inaad ka baxdo habkan beerta oo dooro ilkaha. Isticmaalka ilkaha, waxaa suurtogal ah in la helo caleemaha kowaad horaantii 1 usbuuc ka dib marka la beero, ugu badnaanba - in 2. Uma baahna in la yidhaahdo in ilkaha hore loo qoday ay yihiin jid cad oo lagu sii kordhayo toon, i.e. soo bixitaanka degdeg ah ee caleemaha.
Haddaba, sidee baad u soo saartaa toonta, tusaale ahaan, dhirta qoyan ama abuurka, dheriga daaqadaha guriga, oo ay ku jiraan jiilaalka? Waxaa lagama maarmaan ah in laga tago meel u dhexaysa beereedka, ugu fiican dhamaantood - 4 - 5 cm. Qoto-dheeraantu ma ciyaarin door muhiim ah - markasta caleemaha ayaa soo baxaya. Waxaa jira farqi yar oo waqtiga muuqaalka ah: fogaan ah 3 - 4 cm dusha sare, waxay u muuqdaan todobaad, 5 - 10 cm oo kaliya 2 toddobaad.
Ilig kasta (cufan, qalalan iyo nadiif ah) ayaa si gooni ah loogu beeray carrada dhexdhexaadka ah, halka godadka yaryar ay horey u sameeyeen, si ay ilkaha kor ugu qaadaan dhamaadka fiiqan. Laguma talin in ilkaha lagu cadaadiyo subagga, sababtoo ah waxay ku qasbanaan doontaa in ay xoojiso.
Haddii loo baahdo, beeritaanka waxaa loo kala saari karaa dhowr marxaladood: ilkaha dhirta ee kooxo kala duwan oo kudhisan 5 ilaa 10 maalmood (iyadoo ku xiran qoto dheer oo ay ilkuhu ku haboon yihiin) si ay u soo goosataan dalagga si joogto ah. Sidoo kale, toonta waxaa mararka qaar lagu beeray dhir la qalajiyey dhirta dufanka leh, waxay dareemeysaa inay weyn tahay, waxayna ka caawisaa in ay ka takhalusto dhirta cayayaanka, haddii ay jirto. Wixii beerto waxay ku haboontahay ciidda dabacsan, xitaa dhulka caadiga ah ee beerta.
Waxaan kugula talineynaa in aad daawato fiidiyowga ku saabsan tayada sii kordhaya ee guriga:
Waa maxay meesha loo dhejiyo dheriga?
Xaaladda ugu muhiimsan waa iftiin aad u wanaagsan oo leh qorraxda tooska ah. haddii ay jirto iftiin la'aan, nalalka dhaadheer waa in loo isticmaalaa siinta 8 saacadood oo iftiin buuxa ah.. Haddii kale, geedo ayaa soo baxaya wax badan ama ma sameyn doonaan.
Waxaa ugu wanaagsan in la cabo 1 mar 2 - 3 maalmood, inta lagu jiro mudadaas ciidda waxay yeelan doontaa wakhti ay ku qalalaan, iyo xididada ma bilaabi doonaan in lageeyo qoyaanka xad dhaafka ah ee substrate ah.
Waxaad ubaahan tahay inaad bacrimiso adoo adeegsanaya bay'ad caan u ah: Doodwarka ama shimbiraha. Haddii aysan suurtagal ahayn, waxaad isticmaali kartaa cuntada la iibsaday.
Iftiimintu waa inay noqotaa qaabka qorraxda tooska ah waxayna bixisaa 8 saacadood maalintii. Haddii awoodda ay ku jirto kuulada, nalalka dhaadheer waa in la isticmaalo.
Haddii aad rabto, waad hagaajin kartaa horumarka: adoo qaadanaya madax weyn oo toon ah, waa in aad si joogto ah u gooyaa cagaarka iyo gaar ahaan fallaaraha, caleentana uma baahnid inaad taabatid.
Goorma iyo sida loo goosanayo?
Goynta ayaa suurtagal ah oo keliya marka caanuhu gaabinayaan fallaadho toosan oo ay noqdaan kuwo toosan, oo caleemuhu waxay bilaabaan inay qalalaan oo qallalaan. Si aad u ururiso toonta, waxaad u baahan tahay inaad si taxaddar leh uga soo jiiddo weelka oo aad u qalajiso, ka dibna u daawee sida haddii koray dhulka.
Tiknoolojiyada beeraha ee miyir-biyoodka
Cagaarka cagaarka ah ee koritaanka dhaadheer - habka soo goosashada adoon isticmaalin ciidda. Haddaba sida loo soo saaro toonta guriga at windowsill iyada oo loo marayo farsamada this? Si arrintan loo sameeyo, waxaa lagama maarmaan ah in la nadiifiyo dhar kasta oo toon ah oo jilicsan oo dhaadheer ah, ku shub nus nus koob oo biyo ah oo dushooda ku rid. Inta lagu jiro geedi socodka sii kordhaya, waxaad u baahan tahay inaad haysato heerka halbeeg ee dareeraha, ka dibna goosashada waxaa la heli karaa 2 jeer: 1 hal usbuuc, iyo 2 2 toddobaad.
Dhibaatooyinka iyo dhibaatooyinka suurtagalka ah
Dhibaatada kaliya ayaa ah iftiiminta, taas oo kiisaska intooda badan aaney ku filneyn, waana arrin sababtoo ah muuqaalka muuqaalka ah ee soo-gelitaanka wuxuu dhacaa waqti cayiman. Oo sidaas daraaddeed, ka hor inta aadan ku beerin toonta guriga, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in xaaladdan la daboolo, sababtoo ah haddii kale shaqada oo dhan wax khasaare ah ayay noqon doontaa.
Guddi: Haddii aad isticmaasho nooc gaar ah oo toon ah mudo cayiman oo ay tahay in ay koraan, markaa waa in aysan jirin wax dhibaato ah oo beerashada, maxaa yeelay toonku waa mid adag oo awood u leh inuu iska caabiyo cayayaan iyo cudur.
Geedi socodka ah ee toonta ee guriga ku yaala windowsill waa mid aad u xiiso badan, sababtoo ah wax walbo waqti yar ayuu dhacaa, umana baahnid inaad sugto dhowr bilood si ugu dambeyntii u aragto natiijooyinka shaqadaada. Waxa kaliya oo muhiim ah in la waafajiyo dhammaan shuruudaha kor ku xusan!